Global Voices teny Malagasy · 5 Janoary 2018
05 Janoary 2018
Tantara tamin'ny 05 Janoary 2018
Amerika Latina05 Janoary 2018
Asehon'ny Zo Hahazo Vaovao ao Sri Lanka ny Lalam-Panakanana Tranonkala
Azia Atsimo05 Janoary 2018
Manambara ny vaovao navoakan'ny Vaomiera Misahana ny Fifandraisandavitra fa 13 ireo tranonkala nosakanana hatramin'ny taona 2015, tafiditra amin'izany ireo tranonkala mamoaka vaovao politika sy tranonkala vitsivitsy mamoaka sary vetaveta.
Vaovao Avy Amin'ny Tontolon'ny Bilaogy Shinoa
Teny malaza tamin'ny taona 2005: Satria antomotra ny fiafaran'ny taona 2005, namoaka ny teny mafana indrindra tao amin'ny aterineto Shinoa (ZH) ny Baidu, milina fikarohana lehibe indrindra amin'ny teny Shinoa;
Amerika Avaratra05 Janoary 2018
Ary Ireo Firenena Tsara Indrindra Erantany Dia ….
Nihevitra izahay fa : "Tsy mahalala ny zava-drehetra ny The Economist!" ary nandefa ny fanadihadianay manerantany manokana momba ny "firenena tsara indrindra" eto amin'izao tontolo izao. Hanolotra ny kapila mangirana Putumayo mirakitra hira Reggae Afrikana ho an'ireo izay manome ny safidy tsara indrindra ny Global Voices.